Izindaba - Ungawukhetha kanjani umbhede ofanele wesibhedlela sasekhaya
Ungawukhetha kanjani umbhede ofanele wesibhedlela sasekhaya
1. Ukuphepha nokuzinza kwemibhede yokuhlengikaza. Umbhede wabahlengikazi ojwayelekile owesiguli esinokuhamba okulinganiselwe futhi esilele embhedeni isikhathi eside. Lokhu kubeka phambili izidingo eziphakeme zokuphepha nokuzinza kombhede. Umsebenzisi kufanele aveze isitifiketi sokubhaliswa nelayisense yokukhiqiza yomkhiqizo kuDrug Administration lapho ethenga. Ngale ndlela, ukuphepha kokunakekelwa kwezokwelapha kombhede wabahlengikazi kuqinisekisiwe.
2. Ukusebenziseka kombhede. Imibhede yabahlengikazi ingahlukaniswa ngogesi nencwajana. IManuwali ilungele izidingo zabahlengikazi zesikhashana futhi ingaxazulula inkinga yobunesi enzima ngesikhathi esifushane. Ugesi ulungele imindeni eneziguli ezihlala isikhathi eside embhedeni ezinokukhubazeka kokuhamba. Lokhu akugcini nje ngokwehlisa umthwalo kubasebenzi abahlengikazi nasemalungwini omndeni, kepha okubaluleke kakhulu ukuthi iziguli zingalawula izimpilo zazo ngokwazo, okuthuthukisa kakhulu ukuzethemba kwazo empilweni, hhayi empilweni kuphela. Izidingo zomuntu nazo zifinyelele ekwanelisekeni ngokwezinga lempilo, elilungele ukwelashwa kwesifo sesiguli.
Okwesithathu, ezomnotho zemibhede yokuhlengikaza, imibhede yokonga kagesi inamandla kunemibhede yabahlengikazi yezandla, kodwa intengo iphindaphindwa kaningana naleyo yemibhede yabahlengikazi yezandla, kanti eminye enemisebenzi ephelele ifinyelela amashumi e-US $ 15,000. Lesi sici kufanele futhi sicatshangelwe lapho uthenga.
4. Amashidi okulala abahlengikazi anamafolda amabili, amafolda aphindwe kabili amafolda amathathu, amafolda amane, njll. Lokhu kufanelekile ukunakekelwa kwezempilo kwezinye iziguli ezilulama ukuphuka kanye neziguli ezihlale isikhathi eside embhedeni. Kuyinto elula ukulala kweziguli ezikhethekile, ukutadisha, ukuzijabulisa nezinye izidingo.
5. Imibhede yabahlengikazi enezindlu zangasese nama-alamu okuswakama amathuluzi wokugeza imoto nokugeza izinyawo. Lawa madivayisi asiza ekunakekelweni okujwayelekile kokuzihlanza kwesiguli kanye nasezigulini zokungasebenzi kahle komchamo, futhi kulungele ukunakekelwa kwesiguli nokuzikhulula.
I-Laptop Trolley, Inqola Yesibhedlela, I-Trolley Medical, Inqola Yezokwelapha Enamadraki, Inqola Yezokwelapha Yezokwelapha, Inqola yabahlengikazi engenantambo,